Wararka Maanta: Jimco, Aug 16, 2013-Dagaalyahano taabacsan Ururka Al-shabaab oo gurigiisa kala baxay taliyihii hore ee Nabad-sugidda Magaalada Baydhabo
Wararka ayaa sheegaya in Mayoow Teesoow ay la joogeen xilliga weerarka lagu qaaday xubno ka tirsan Al-shabaab oo ay aad isugu dhow yihiin Sheekh Mukhtaar Roobow Cali (Abuu-Masuur) oo uu khilaaf kala dhexeeyo dhinaca kale ee Al-shabaab.
Guriga sarkaalkan ay kexeysteen Al-shabaab ayaa wuxuu ku yaallay deegaanka Labaatan-jiroow, iyadoo warar aan la hubin ay sheegayaan in la geeyay deegaanka Iidaale oo 60-km u jira degmada Diisoor oo ay kooxda Al-shabaab ka taliso.
Mayow Teesoow horay ugu biiray Al-shabaab kaddib markii uu ka goostay dowladdii KMG ahayd ee Soomaaliya sannadkii 2011. Balse dib ayuu uga soo laabtay, lamana oga sababta keenay in Al-shabaab ay afduubaan.
Ehellada sarkaalkan ayaa aad uga walwalsan xaaladdiisa, maadaama uu ahaa nin si aad ah looga yaqaannay gobollada Bay, Bakool iyo Shabeellada hoose uuna isaga tagay Al-shabaab oo uu muddo ka tirsanaa.
Ma jiro hadal kasoo baxay Maamulka degmada Baydhabo iyo kan gobolka Bay oo ku saabsan afduubka ay kooxda Al-shabaab ku qabsadeen Mayoow Teesoow.